Kadib kulanka Baydhabo, Ma waxaa soo afjarmay khilaafkii madaxda Federaalka iyo Maamulada • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Kadib kulanka Baydhabo, Ma waxaa soo afjarmay khilaafkii madaxda Federaalka iyo Maamulada
Kadib kulanka Baydhabo, Ma waxaa soo afjarmay khilaafkii madaxda Federaalka iyo Maamulada
January 17, 2019 - By: Abdirisak Faamoos
Kulan habeenimadii xalay ku dhexmaray magaalada Baydhabo madaxda dowlada Federaalka iyo qaar kamid ah kuwa maamul goboleedyada ayaa lagu gorfeeyay xaalada isbedel siyaasadeed ee dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ,madaxweyne ku xigeenka Puntland iyo gudoomiyaha golaha wakiilada, madaxweynaha Koonfur galbeed, madaxweynaha Hirshabeele ,madaxweyne ku xigeenka Galmudug iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka Jubaland ayaa qeyb ka ahaa kulankii xalay ka qabsoomay magaalada Baydhabo.
Kulanka ayaa wararku ay tilmaamayaan in intiisa badan lagu gorfeeyay sida ugu macquulsan ee looga wanaajin karo cilaaqaadka dowlada dhexe iyo maamul goboleedyada xili mudooyinkii ugu dambeeyay uu xumaa xiriirka Dowlada Federaalka iyo maamulada dalka.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo oo kulankii xalay hadal ka jeediyay ayaa adkeeyey muhiimadda ay leedahay hagaajinta xiriirka dowlada Federaalka iyo dowlad goboleedyada waxaana uu hoosta ka xariiqay in lagama maarmaan ay tahay wadashaqayn buuxda oo dhexmarta labada dhinac, si loo ilaaliyo qaranimada iyo danaha shacabka Soomaaliyeed.
Si lamid ah madaxda dowlad goboleedyada ee qeyb ka ahaa kulankii xalay ka qabsoomay magaalada Baydhabo ayaa soo dhaweeyay isbedelka ku yimid cilaaqaadka dowlada dhexe iyo dowlad goboleedyada waxaana ay sheegeen in wixii madmadow ah ee jira loo baahan yahay in meesha laga saaro si loo gaaro hadafka laga leeyahay horumarka dowladnimada Soomaaliya.
Inkastoo madaxweynayaasha Jubaland iyo Galmudug aanay qeyb ka ahayn kulankii xalay hadana waxaa ku matalay oo goobjoog ahaa Maxamed Xaashi carabey oo ah madaxweyne ku xigeenka Galmudug hase ahaate muran uu kala dhexeeyo hogaanka sare ee maamulkiisa iyo gudoomiyaha Baarlamaanka maamulka Jubaland.
Shalay ayay ahyd markii madaxweyne ku xigeenka cusub ee Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash uu ku kaftamay in uu isbedel ku yimid xiriirka dowlada Federaalka iyo maamul goboleedyada oo uu hagaagay xili uu khudbad ka jeediyay xafladii caleemo saarka madaxweynaha cusub ee Koonfur Galbeed.
Si kastaba Kulanka Baydhabo iyo ka qeybgalka caleemo saarka madaxweynaha KG ayaa la saadaalin karaa ama la fili karaa in uu wax badan ka badalayo xiriikii xumaaday ee madaxda Federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada maadama ay isbedelo ka hanaqaadeen maamuladii ugu tunka weynaa ee ku jiray golaha iskaashiga dowlad goboleedyada.